Ahoana ny fanavaozana ny fisehoan'ny Mozilla Thunderbird | Ubunlog
Ahoana ny fanavaozana ny fisehoan'ny Mozilla Thunderbird
Mozilla Thunderbird dia iray amin'ireo mpanjifa mailaka malaza sy mandany fotoana betsaka amin'ny tontolon'ny Gnu / Linux. Ity mpanjifa mailaka ity dia mandaitra ary misy safidy maro ho an'ny mpampiasa farany sy ny orinasa saingy tsy maintsy ekentsika fa ny endriny dia lasa somary lany andro, zavatra tsy ankasitrahan'ny mpampiasa maro.
Na dia Mozilla Thunderbird dia loharano misokatra ary notazonin'ny Mozilla Foundation, mpampiasa maro no aleony mampiasa rafitra token izay azony idirana amin'ny kaonty mailaka-nay sy ny rehetra mba hisehoan'ny endrika ivelany. Araka izany, tian'ny mpanjifa Geary o MailS spring Ampiasaina mihoatra ny Mozilla Thunderbird izy ireo na dia vitsy aza ny endri-javatra.Androany, hanazava isika ny fomba fanovana ny fisehon'ny Mozilla Thunderbird ary miaraka amin'ny fanovana roa mba hahatonga ny mpitantana mailaka ho hita ankehitriny kokoa nefa tsy very fampiasa.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia apetraho mitsivalana ireo takelaka, zavatra tena mora atao. Noho izany dia tsy mankany amin'ny menio preferences izahay ary Ao amin'ny Disposition dia manamarika ny safidy «Topy mitsangana» miaraka amin'izay hamboarina indray ny efijery amin'ny tsanganana telo na fizarana telo, toy ireo mpitantana mailaka ankehitriny. Raha te hihazona ny predisposition ny fomba fijery isika, dia tsy maintsy avelantsika hody.
Ankehitriny dia tsy maintsy manova ny endrika ivelany isika, ny lokon'ny Mozilla Thunderbird. Amin'ity no hampiasaintsika lohahevitra fampiharana roa antsoina hoe Monterail Dark sy Monterail Light. Azontsika atao ny mamita ireo olana ireo tahiry github an'ny mpamorona, amin'ity tranga ity dia antsoina hoe Emanuele Concas izy io, ary raha vao manana ny lohahevitra isika dia mamoaka ny rakitra amin'ity adiresy manaraka ity izahay:
Manidy an'i Mozilla Thunderbird izahay izao ary manokatra azy io indray, Hamarininay fa mahatalanjona ny fiovan'ny endrika ary ankehitriny manana Mozilla Thunderbird vaovao izahay, mahery sy tsara tarehy, sa tsy izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ahoana ny fanavaozana ny fisehoan'ny Mozilla Thunderbird
Tsy maintsy mandika ireo rakitra misy ireo lahatahiry mankany amin'ilay làlana voalaza aho na amin'ny fametrahana fotsiny ireo lahatahiry tsy misy zip izay manova ny endrika ivelany?
Tsy maintsy esorinao ireo zotram-pifandraisana.
Salama, fantatro fa tsy dia misy ifandraisany amin'ny bilaogy Ubuntu izany, saingy azonao atao ve ny milaza amiko raha misy ireo lohahevitra ho an'ny kinova Windows 10? Sa lazao amiko hoe iza avy no hitovy indrindra? Misaotra betsaka!
Mamaly ny tenako aho raha sanatria mety ho an'olona io:
Mampiasa Thunderbird 52.5 aho ary tsy hitako ny safidiko amin'ny safidiko. Ho an'ny kotroka vaovao ve izany?
Niaraka tamin'ity programa ity nandritra ny taona maro aho ary tsy nanova azy na amin'inona na amin'inona, fa ny palitao amin'ny rindrina dia tsy handratra ...
Oh !! Hitako io, ao anaty menio zahana izany. Miala tsiny aho!!
Ahoana ny fomba automatique automatiquement partitions amin'ny Ubuntu 18.04 LTS?
Ahoana ny fomba ahafahana manao zoro mafana ao amin'ny Ubuntu 18.04 LTS?